Fanadinana : 4% ireo tsy niadina ny CEPE | NewsMada
Fanadinana : 4% ireo tsy niadina ny CEPE
488 ny mpiadina tsy nanatrika ny fanadinana CEPE ho an’ny Cisco Antananarivo Renivohitra. 28 135 no tonga nanatontosa izany omaly amin’ireo 28 623 nisoratra anarana fa handray anjara. Hatramin’ny omaly hariva tamin’ny 4 ora, 96,22% ny tahan’ny fahatongavana teo amin’ny mpiadina, 3,7% amin’ ireo nisoratra anarana tsy nanatrika ny CEPE. Antontanisa azo avy amin’ny Cisco 106 amin’ireo 114 mandrafitra ny fampianarana ireo. Ankoatra ny tsy fahatongavan’ny mpiadina, tsy nisy ny olana goavana niseho nandritra ny fiatrehana ny fanadinana tao anatin’ny tontolo andro.
Ho an’ny Cisco Akora sy Ivohibe (faritra atsimon’ny Nosy), nidina ny isan’ny mpiadina raha mitaha ny tamin’ny taon-dasa. Nisy tamin’ireo mpiadina koa no tsy tonga nanatrika ny CEPE omaly noho ny tsy fandriampahalemana miseho, araka ny vaovao nampitain’ny radiom-pirenena mivantana avy any an-toerana.
1 760 ny foibem-panadinana nandray ny mpiadina rehetra manerana ny Nosy. Hanomboka anio ny fitsarana ny taratasim-panadinana. Eto Antananarivo, 15 ny foibem-pitsarana. Manana toeram-pandraisana ny antso momba ny fizotry ny fanadinana sy ny olana mila vahana ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena azo amin’ny laharana maitso 020 30 807 86. Miasa tsy tapaka andro sy alina ny tomponandraikitra ao amin’ny Com center. Mandray ny vokatra avy amin’ireo foibe efa nahavita ny fitsarana koa izy ireo.
Hampiasa logiciel vaovao ny tomponandraikitra amin’ny fitsarana ka ho tarakely ny fivoahan’ny valim-panadinana CEPE fa tsy hihoatra ny 10 andro kosa.